Jabulela uMkhosi Wokukhanya eBoimorto, A Coruña | Izindaba Zokuhamba
Kulezi zinsuku kungenzeka ukuhambela imikhosi yomculo engenakubalwa kulo lonke izwe lethu. Eminye ibibalulekile ezweni lonke iminyaka eminingi, kepha abanye bakwazile ukuzibeka ngesikhathi esifushane, njenge Umkhosi Wokukhanya weBoimorto, evelele ngezizathu eziningana.
Lesi sikhathi sizobona ukuthi kuphi nokuthi yini i- Umkhosi wokukhanya, ngaphezu kwezizathu zokuthi kungani kungukuqokwa okuyisibopho okungafanele kuphuthelwe. Kunezinto eziningi ezenza lo mkhosi ugqame kweminye eminingi, kusuka lapho ukhona kuya enhlosweni yawo.
1 Umlando woMkhosi Wokukhanya
2 Indawo yomkhosi
3 Amaqembu asedlalile kule festival
4 Izikhungo zemikhosi
5 Eminye imikhosi yaseGalician
Umlando woMkhosi Wokukhanya
UMkhosi Wokukhanya waqala ngonyaka Ngo-2012 ngesandla somculi uLuz Casal. Lo mculi uzalelwe eBoimorto, indawo ekhethelwe ukwenza umkhosi. Kusukela lapho lo mkhosi ubulokhu ukhula futhi uthuthuka, kunabaculi abadumile abavela emkhakheni wamanje. Kepha lo mcimbi awuzalwanga njengesinye nje isikhala sokusebenza, kunalokho wazalwa ngenhloso yobumbano ukukhulisa imali. Futhi kuyindlela yokuqhakambisa ukubaluleka kwezindawo zasemakhaya nentuthuko yazo, kuhlangene nokuzibophezela kwabaculi kule Galician yasemakhaya. Kusukela ngo-2012, bekunomkhosi owenziwa minyaka yonke, phakathi nenyanga kaSepthemba, ngezinsuku ezenza kube lula nokuhambela lo mcimbi, kwazise akuvamile ukuthi uqondane neminye, into eyenzeka ehlobo.
Lo mkhosi awenzeki emadolobheni amakhulu noma ezindaweni ezimaphakathi, kodwa wenziwa e Inani labantu baseBoimorto. Leli dolobha lisendaweni esifundazweni saseLa Coruña, endaweni emaphakathi nezwe. Itholakala kumakhilomitha angama-44 ukusuka edolobheni laseSantiago de Compostela. Yindawo yasemakhaya futhi ethule, ethola amakhulu ezivakashi phakathi nenyanga kaSepthemba, iba yisikhungo sokunakwa kwabezindaba nalabo abathatha isinqumo sokuwujabulela lo mcimbi.
Amaqembu asedlalile kule festival
Ezinye ze amaqembu adlale kuhlelo olwedlule Bathandana nabaseLesbian, Kase. Furious Monkey House, Agoraphobia, Riff Raff, Marilia Andrés, Nunatak, Chris Barron, Fredi Leis, Monoulious DOP, Rafa Morcego, Los Vinagres, Mordem, Conchita, Rodrigo Mercado, Los Motores Rock de Vigo, Arzúa Music Band, Imisipha!, Pelepau , MJ Pérez, Tempo Norte, Santiaguiños de Boimorto, Xoán Curiel, Pandereteiras de Verducido, Zirconita, Dani Barreiro & Friends noPedro el Granaíno. Phambilini bekunamaqembu afana noMago de Oz noma uJarabe de Palo. Kuhlelo ngalunye ungabona kusengaphambili amaqembu azodlala, ukuze ukwazi ukwazi bonke abaculi ukuthi bathenge amathikithi.
Emkhosini kukhona okuthakazelisayo indawo yemakethe eba enye yezindawo ezithakazelisa kakhulu. Emakethe kungenzeka ukuthi uthole amatafula anambitha ukudla noma imikhiqizo engokwemvelo neyengcweti. Kukhona konke kusuka ekusayineni amabhuku kuya emibonisweni nasekuboniseni ukupheka. Kungenzeka ubone uhambo lomkhosi ukuze wazi ukuthi imibukiso ehlukene kanye nokunambitha kungabonakala nini ukuze ungaphuthelwa noma yimuphi wabo.
Kulo mkhosi kukhona indawo yawo wonke umuntu. Ngenxa yezinsiza zayo nezinhlobonhlobo zabaculi, kubuye kube yindawo ekhethwe yimindeni ukujabulela lolu suku. Kungakho banefayela le- indawo yezingane lapho abancane bangajabulela khona. Kule ndawo kunemidlalo, imisebenzi kanye nemihlangano yokufundisana.
Enye indawo yokuzijabulisa yi- i-cinema nendawo yaseshashalazini. Kulesi sikhala ungabona amadokhumentari athakazelisayo, izikhindi, ama-monologue nemidlalo yaseshashalazini. IMans Space iyindawo yokukhuluma ngezamabhizinisi nokuhambela izingxoxo ezithokozisayo ngezindaba zamanje.
El Isikhala se-Gastro Mahou Yindawo lapho ungathokozela khona izikhathi ezahlukahlukene zokupheka ngokuhola abapheki baseGalician. Indawo yokuzama izinto ezintsha kukhishi eliyikhwalithi.
Eminye imikhosi yaseGalician
IGalicia yindawo eqhubeka imfashini, ngakho-ke ngesikhathi sasehlobo ungajabulela zonke izinhlobo zemicimbi, imikhosi kanye namaphathi. Kuneminye imikhosi eminingi engaba nentshisekelo, futhi ivame ukwenziwa phakathi nezinyanga zikaJulayi nango-Agasti. I- IPortamérica iyisibonelo esihle, othuthele edolobheni laseCaldas de Reis futhi unikeza amakhonsathi ngamaqembu ahamba phambili enkundleni yezwe. IVF eVilalba, eLugo, ivame ukubanjwa ngoMashi noma ngo-Ephreli. I-Resurrection Fest eViveiro ibhentshimakhi enkulu kazwelonke kumculo onesigqi esinamandla. Umkhosi we-Ortigueira osinikeza amaqembu abantu futhi ungomunye wabadala kunabo bonke. I-O Son do Camiño egujwa e-O Monte do Gozo eSantiago de Compostela noma i-Atlantic Fest e-Illa de Arousa ngezinye izinto ezibalulekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Umkhosi Wokukhanya eBoimorto